मोटी केटीसँग बिहे गर्नु त फाइदै-फाइदा पो रहेछ ! | Liveekhabar, News Portal website, Nepal No.1 News Portal website, Onlince News Portal website
मोटी केटीसँग बिहे गर्नु त फाइदै-फाइदा पो रहेछ !
मोटी केटीसँग विवाह गर्नुका धेरै फाइदा छन् । यसको पहिलो फाइदा हो, मोटी केटीसँग बिवाह गरेपछि सपिङमा तपाईको पैसा खर्च हुने छैन । किनभने मोटी केटीहरु कपडाका बारेमा धेरै सौखिन हुँदैनन् । अर्को फाइदा के भने मोटी केटीहरु पातलो ज्यान भएकी केटीको तुलनामा मनले धेरै सफा हुन्छन् । मोटी केटीको मनमा कसैपृति घृणाभाव हुँदैन । साथै मोटी केटी आफ्नो घर पक्षका व्यक्तिको धेरै ख्याल राख्छिन् ।
एक अनुसन्धानबाट यो पनि पत्ता लाग्यो कि मोटी महिला आफ्ना पतिलाई धेरै माया गर्छन् । उनीहरुका लागि श्रीमान् नै सबैथोक हुन्छ ।
यस्तै मोटी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषहरुमा आत्मबलको विकास हुने पनि एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । उनीहरु हरेक अप्ठेरो समयको सजिलै सामना गर्नसक्ने हुन्छन् । यस्तै मोटी केटी आज्ञाकारी पनि हुन्छन् । जसले गर्दा श्रीमतीले श्रीमानको भनेको कुरा सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण बन्छ । यस्तोमा पति–पत्नीबीच झगडा हुने संभावना पनि निकै कम हुन्छ ।
Newer Postजमिनभन्दा दुई फिट उचाइमा हावामै अड्किएको छ यो अचम्मको ढुंगा, कारण भने यस्तो छ
Older Postबलिउड कलाकार राजपाललाई ३ महिना कैद सजाय
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो...